Fisaorana sy fankasitrahana ny Pastora RASETA - nov. 2016 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Herintaona izao no lasa…
Ny Komitin’ny Synodam-paritany FLM Eoropa (KMSPE) izay nivory ny 24 sy 25 septambra 2016 dia nanapa-kevitra fa hotendrena hitondra Fileovana ao Ile-de-France ny Pastorantsika Mpitondra Fitandremana eto an-toerana, Pastora RASETA.
Pastora RASETA dia natolotry ny Fileovana Paris ho Mpitondra Fitandremana Orléans taorian’ny fotoana lavalava tsy nisiana Pastora teto an-toerana. Telo taona no nitondrany Fitandremana teto amintsika.
Isan’ireo izay nahavita be teto amin’ny Fitandremana Orléans raha i Pastora RASETA. Teo ny asa fitoriana, ireo fampianarana isan-karazany, ny fizaràna ny Sakramenta.
Tamin’ny fotoana nitondrany no nahazoantsika mpiandry vaovao roa, diakona fito fanampiny, mpandray ny fanasan’ny Tompo sy zaza natao batisa, mpampianatra Sekoly Alahady vaovao.
Tia fiaraha-miasa raha i Pastora RASETA, ary be fanetren-tena sy malemy fanahy nefa sady nijoro tamin’ny fitondràny. Ambetiteniny ny hoe ny Tenin’i Jesosy no tokony henoina fa tsy ny an’ny olona.
Niavaka koa Pastora RASETA tamin’ny Toriteny ho an’ny ankizy, izay izy no Pastora voalohany nanao izany teto amin’ny FLM Orléans, noho ny fiaraha-miasa tamin’ny Sekoly Alahady.
Tsaroana koa ny maha-zava-dehibe ny fahatongavana mivavaka sy ny fampaherezany ny Fiangonana tamin’izany indrindra nanoloana ireo fotoan-tsarotra nolalovana. Nanampy azy rahateo Rtoa vadiny tamin’ny fizaràna ny Tenin’Andriamanitra ho an’ny kristiana.
Izy koa no tena isany nanosika isian’ny Fikambanan-Dehilahy teto am-piangonana. Nanomboka koa ny fivorian’ny Faribohitra efatra eto an-toerana.
Tsy adino fa nandritra ny fotoam-piasany no nanaovana ny fanentanana ho amin’ny fampitaovana ny Fiangonana teo amin’ny lafiny fanamafisam-peo. Noho ny fiaraha-mientana tamin’izany dia vory ny hoenti-manana ka novidiana ireo fitaovana fanamafisam-peo sy zava-maneno.
Faraparany mialoha ny hifindràny ho any amin’ny Fileovana Ile-De-France dia mbola nanome fiofanana ho an’ny Komity izy. Hetaheta efa hatry ny ela moa ny nanaovana izany.
Noho izany zava-tsoa noaraisina tamin’Andriamanitra izany, tamin’ny alalan’ny fampiasàny ny mpanompony, no iraisan’ny Fiangonana feo misaotra azy mivady tamin’ny fotoana nipetrahany maha-Raiamandreny azy teto amin’ny FLM Orléans.
Ny Alahady 06 novambra 2016, nandritra ny fotoam-pivavahana natao teto Fleury-les-Aubrais no noraisin’ny Komity sy ireo sampana sy faribohitra tànana Pastora RASETA ho fisaorana sy fankasitrahana azy.
Ny Alahady 13 novambra 2016 kosa no nanaovana fotoana fiarahana miala hetaheta niaraka tamin’ny Fiangonana manontolo taorian’ny fotoam-pivavahana.
Mahatsiaro ny FLM Orléans fa tena nanao izay tratrany ny Raiamandreny Pastora RASETA. Mitondra am-bavaka azy mivady sy ny ankohonany any amin’izay asa itondran’i Jesosy azy indray ary miarahaba ny Fileovana Ile-De-France nahazo Raiamandreny. Jesosy anie hamaly soa an’i Pastora RASETA tamin’izay soa rehetra nentiny teto amintsika. Tsy adino ary mahafaly koa raha izay fifampitondràna nisy.